ခရီးသွားမှတ်တမ်း | Mg Ogga's Notes
နေနှင့် နဂါး မျိုးနွယ်များဆီ ၃
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ် (Northern Shan State Buddhist Youth (NSSBY)) မနက်ခင်းရောက်တော့ ပန်လော့ကျောင်းမှာ မနက်စာစားပြီး ကွတ်ခိုင်မြို့နားက ခိုလုံရွာက ခိုလုံကျောင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တွေနဲ့ အစည်းဝေးလုပ်ဖို့ ရှိတာမို့ မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ ခိုလုံကျောင်းကို ခိုလုံဆရာတော်ရဲ့ကားနဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ခိုလုံရောက်တော့ ကျောင်းမှာ NSSBY အဖွဲ့ဝင်တွေ ရောက်နေကြပြီး အချို့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း သိတယ်။ အချို့ကြတော့လည်း ကျနော်မသိတဲ့ မျက်နှာသစ် မျိုးဆက်သစ် အဖွဲ့ဝင်တွေ။ NSSBY အဖွဲ့တွေရဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေ ကို ပြန်ကြည့်တော့ သင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲလှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ကြတယ်။ ၄ နှစ် ၅ နှစ်ကာလအတွင်း NSSBY အတိုင်းအတွာနဲ့ကြည့်ရင် လုပ်ခဲ့ ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့…
January 10, 2015 in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးထမ်း.
နေနှင့် နဂါး မျိုးနွယ်များဆီ ၂
သင်တန်းဝယ် ပန်လော့ရွာကျောင်းရောက်တော့ သင်တန်းသားဘုန်းဘုန်းတွေကဆွမ်းစားနားနေကြလို့ မတွေ့ ရသေးဘူး။ ဘုန်းဘုန်းတွေအများစုက ကွတ်ခိုင်နဲ့ အနီးတဝုက်ရွာတွေကကျောင်းထိုင်ဆရာတော် တွေက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သာသနာဝန်ဆောင်ပြီး တာဝန်ယူနေရတယ်။ ဒီပန့်လောရွာကျောင်းက ဆရာတော်တစ်ပါးက သီရိလင်္ကာကနေ မာစတာရတဲ့ ဆရာတော်တောင်ရှိတယ် (အဲဒီဆရာတော်က နောက်ပိုင်းတအာင်းဒေသမှာမူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်စေဖို့ လူဝတ်လဲပြီး တအာင်းတပ်မတော်တဲ့ ဝင်သွားတယ်လို့သတင်းကြားတယ်) ထူးထူးခြားခြား တအာင်း ပလောင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကြားဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးကတော့ ရေဦးက အညာသားဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးပါ သင်တန်းလာတက်တာတွေ့တယ်။ ဒီကိုယ်တော်က ကျောက်ထပ်ဆရာတော်ဘုန်းဘုန်းနဲ့ အတူတူလိုက်လာပြီးသင်တန်းတက်ချင်လို့ ကိုယ်စရိတ်နဲ့ ကိုယ်လိုက်ပါလာတဲ့ ကိုယ်တော်တဲ့။ ဘုန့်းဘုန်းအားလုံးတအာင်းလူမျိုးတွေ ဗမာဆိုလို ရေဦးက ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးပဲပါတယ်။ တအာင်းဘုန်းဘုန်းတွေကတစ်ပါးနဲ့ တစ်ပါး စကားပြောရင် တအာင်းလို ပြောတော့ ဗမာကိုယ်တော် နဲနဲ အနေကျပ်နေတော့မြန်မာလိုပြောပေးဖို့ တောင်းပန်လျောက်ထားရတယ်။ ဆွေဇင်က ဘုရားရိုခိုးပြတော့မှ ဘုန်းဘုန်းတွေသံသယရှင်းတော့တယ်။ ကျနော်တွေးမိတာကတော့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်ကော ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ။ မြန်မာပြည်ကသာသနာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်တွေအနေနဲ့ ဘာသာခြား…
January 10, 2015 in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးထမ်း, အတွေ့အကြုံ.
မြတောင်ဇက်ဆိပ်မှာ ကားက တစ်ညလုံးရပ်ထားပုံရတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ဇက်က ကပ်နေပြီ ကိုကျော်စိုးက အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ထပြီး ဇက်ကြီးကို လဖေ့ရေဆိုင်မှတ်လို့တဲ့ သူကိုကြည့်ပြီး သင်းသင်းအေး၊ ဖူးပွင့် နဲ့ ကျနော်တို့ အညာသား ၃ ယောက် အင်းသား ကိုကျော်စိုးကို တသောသောနဲ့ ဝိုင်းဟားကြတာ အူတောင်နာတယ်။ မြတောင်ကနေ ထီးချိုင့်ကြား ဧရာဝတီမြစ်ကြီးပေါ်မှာ သောင်ထွန်းနေတာမှာ အကြီးကြီးပဲ ဟိုအရင်က ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဇက်ပေါ်မှာ ကိုကျော်စိုးနဲ့ ဖူးပွင့်တို့က ပဲပေးလိုက် ကျနော်က ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက် နဲ့ ပျော်စရာကြီး။ ထီးချိုင့်ရောက်တော့ လဖေ့ရေဆိုင်မှာ မနက်စာစားကြတယ်။ ဆိုင်ပုံစံကြည်ပြီး မဟန်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမှာတာကိုကြည့်တော့ အခြေအနေက အတော်ဆိုးတယ် ဒါကြောင့် အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးက ကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ အကြော် ၅၀၀ ဖိုးလောက်သွားဝယ်ပြီး စားလိုက်တယ်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့…
June 27, 2013 in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, အတွေ့အကြုံ, ဆောင်းပါး.